Daawo Sawirada: Oday 101-sano jir ah oo laga helay isaga oo Nool Dhismo dumay oo maalmo badan ku hoos aasnaa!! | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: May 4, 2015, 3:34 pm
Shaqaalaha badbaadada dadka ay waxyeeleesay Dhul Gariir dhawaan ku dhuftay qeybo kamid ah Dalka Nepal ayaa ku guuleestay in ay nolol kusoo helaan afar qof oo ku hoos jiray dhisamayaal ku dumay dhul gariirkaasi.
Waxaa dadka lasoo bad baadiyay oo dhismo dumay hoostiisa laga soo helay kamid ah nin o day ah oo jira 101-sano oo lagu magacaabi Funchu Tamang , waxaana Odaygan laga soo helay tuulo 80 KM dhanka waqooyi-bari kaga beegan caasimada Nepal ee Kathmandu.
Odaygan laga dhax helay dhismo kusoo dumay Dhul gariirka ku dhuftay Dalka Napel ayaa halkaasi ku jiray sida ay Warbaahinta Dalkaasi tabiyeen mudo 7-maalin ah, waxaana wali ay shaqaalaha Badbaada ay baadi goob ugu jiraan in ay helaan dad kale oo nool.
Kumanaan qof ayaa wali la heyn jolol iyo geeri , waxaana dadka baadi goobka loogu jiro kamid ah dad gaaraya 1,000 qof oo reer Galbeed ah oo dalka Nepal Dalxiis u joogay, waxaana dhul gariirka ku dhuftay dalka Nepal ku dhintay dad kor u dhaafa 7-Kun oo qof.